मत्ती ५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
५ भीडलाई देखेपछि उहाँ डाँडामाथि उक्लनुभयो र उहाँ बस्नुभएपछि चेलाहरू उहाँकहाँ आए। २ त्यसपछि उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो: ३ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले परमेश्वरको मार्गनिर्देशनको खाँचो महसुस गर्छन्‌,* किनकि स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। ४ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले शोक गर्छन्‌, किनकि तिनीहरूलाई सान्त्वना दिइनेछ। ५ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जो कोमल स्वभावका छन्‌, किनकि तिनीहरू पृथ्वीको उत्तराधिकारी हुनेछन्‌। ६ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जो न्यायका* लागि भोकाउँछन्‌ र तिर्खाउँछन्‌, किनकि तिनीहरू तृप्त हुनेछन्‌। ७ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जो कृपालु छन्‌, किनकि तिनीहरूलाई कृपा देखाइनेछ। ८ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसको मन चोखो छ, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्‌। ९ “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले शान्ति कायम गर्छन्‌, किनकि तिनीहरू ‘परमेश्वरका छोराहरू’ कहलाइनेछन्‌। १० “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जो न्यायोचित काम गरेकोले खेदोमा परेका छन्‌, किनकि स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। ११ “आनन्दित हौ तिमीहरू, जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको बदनाम गर्छन्‌, खेदो गर्छन्‌ र तिमीहरूविरुद्ध झूट बोलेर नानाथरी खराब कुरा भन्छन्‌। १२ तब रमाओ र खुसीले उफ्र, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूका लागि ठूलो इनाम छ; तिमीहरूअघिका भविष्यवक्ताहरूलाई पनि तिनीहरूले यसरी नै खेदो गरेका थिए। १३ “तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ तर नुनको नुनिलोपन हरायो भने त्यसलाई फेरि केले नुनिलो पार्ने? त्यो त बाहिर फालिन र मान्छेले कुल्चनबाहेक केही काम लाग्दैन। १४ “तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। डाँडामाथि बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। १५ मानिसहरूले दियो बालेर पाथीले छोप्दैनन्‌ तर पानसमाथि राख्छन्‌ र घरमा हुनेहरू सबैलाई त्यसले उज्यालो दिन्छ। १६ त्यसरी नै मानिसहरूसामु तिमीहरूको ज्योति चम्कोस् र तिमीहरूको सुकर्म देखेर तिनीहरूले स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाको महिमा गरून्‌। १७ “मोशाको व्यवस्था वा भविष्यवक्ताहरूको शिक्षालाई रद्द गर्न म आएँ भनी नठान। रद्द गर्न होइन तर पूरा गर्न म आएँ। १८ किनकि म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु बरु आकाश र पृथ्वी बितेर जाला तर यी सबै कुरा पूरा नभएसम्म व्यवस्थाको सबैभन्दा सानो अक्षर वा त्यसको बिन्दु पनि मेटिनेछैन। १९ यसकारण जसले सानाभन्दा साना आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटा उल्लङ्घन गर्छ र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउँछ, त्यो स्वर्गको राज्यमा पस्न लायकको गनिनेछैन। तर जसले ती पालन गर्छ र सिकाउँछ, त्यो नै स्वर्गको राज्यमा पस्न लायकको गनिनेछ। २० म तिमीहरूलाई भन्छु, यदि तिमीहरूको काम परमेश्वरको नजरमा शास्त्री र फरिसीहरूको कामभन्दा अझ असल भएन भने कुनै पनि हालतमा तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउनेछैनौ। २१ “प्राचीन समयका मानिसहरूलाई यसो भनिएको तिमीहरूले सुनेका छौ: ‘तिमीले हत्या नगर्नू तर जसले हत्या गर्छ, ऊ अदालतसामु जबाफदेही हुनेछ।’ २२ तर म तिमीहरूलाई भन्छु जो आफ्नो भाइसित क्रोधित भइरहन्छ, ऊ अदालतसामु जबाफदेही हुनेछ; अनि जसले कुवाच्य बोलेर आफ्नो भाइको अपमान गर्छ, ऊ सर्वोच्च अदालतसामु* जबाफदेही हुनेछ र जसले ‘ए नालायक बेकुफ!’ भन्छ, ऊ गेहेन्नाको * आगोमा फालिन लायकको हुनेछ। २३ “तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउन ल्याउँदा तिम्रो विरुद्धमा तिम्रो भाइसित केही गुनासो छ भन्ने तिमीलाई झल्याँस्स याद आयो भने २४ आफ्नो भेटी त्यहीं वेदीअगाडि छोड र गएर पहिले आफ्नो भाइसित मिलाप गर अनि फर्केर आएपछि आफ्नो भेटी चढाऊ। २५ “तिमीलाई मुद्दा लगाउने मानिससित बाटोमा छँदै तुरुन्तै सम्झौता गरिहाल नत्रता तिम्रो वादीले तिमीलाई न्यायाधीशकहाँ सुम्पिनेछ र न्यायाधीशले अफिसरको जिम्मा लगाउनेछन्‌ र तिमी झ्यालखानामा जाकिनेछौ। २६ म तिमीलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिमीले पाई-पाई* चुक्ता नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट छुट्न पाउनेछैनौ। २७ “तिमीहरूले यसो भनिएको सुनेका छौ: ‘तिमीले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध नराख्नू।’ २८ तर म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले कुनै स्त्रीलाई हेरिरहन्छ र आफूमा कामवासना जगाउँछ, त्यसले मनमनै ऊसित यौनसम्बन्ध राखिसकेको हुन्छ। २९ यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ* भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। किनकि तिम्रो सिङ्गै शरीर गेहेन्नामा फ्याँकिनुभन्दा तिम्रो एउटा अङ्ग गुमाउनु नै तिमीलाई फाइदाजनक हुन्छ। ३० साथै, यदि तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ। किनकि तिम्रो सिङ्गै शरीर गेहेन्नामा पर्नुभन्दा तिम्रो एउटा अङ्ग गुमाउनु नै तिमीलाई फाइदाजनक हुन्छ। ३१ “अनि यसो पनि भनिएको थियो: ‘जसले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्छ, त्यसले उनलाई छोडपत्र देओस्।’ ३२ तर म तिमीहरूलाई भन्छु, अवैध यौनसम्बन्धबाहेक* अन्य कारणले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्नेले उनलाई परपुरुषसित यौनसम्बन्ध राख्ने जोखिममा पार्छ र जसले त्यसरी सम्बन्धविच्छेद भएकी स्त्रीसित विवाह गर्छ त्यसले परस्त्रीसित यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिन्छ। ३३ “प्राचीन समयका मानिसहरूलाई यसो भनिएको पनि तिमीहरूले सुनेका छौ: ‘कसम खाएपछि तिमीले त्यसलाई नतोड्नू तर यहोवासित गरेको भाकल पूरा गर्नू।’ ३४ तर म तिमीहरूलाई भन्छु: कसम खाँदै नखाओ। न स्वर्गको नाममा किनकि त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो; ३५ न पृथ्वीको नाममा किनकि त्यो उहाँको पाउदान हो; न यरूशलेमको नाममा किनकि त्यो महान्‌ राजाको सहर हो। ३६ न त तिमीले आफ्नो शिरको नाममै कसम खानू, किनकि तिमीले एउटा केशलाई समेत सेतो अथवा कालो बनाउन सक्दैनौ। ३७ तिमीहरूको वचन ‘हुन्छ’ भने ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भने ‘हुँदैन’ होस्, किनकि यसभन्दा बढ्ताचाहिं त्यस दुष्टतर्फको* हो। ३८ “तिमीहरूले यसो भनिएको सुनेका छौ: ‘आँखाको सट्टा आँखा र दाँतको सट्टा दाँत।’ ३९ तर म तिमीहरूलाई भन्छु: दुष्टको प्रतिकार नगर तर जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउँछ, उसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। ४० अनि यदि कसैले तिमीलाई अदालत लगेर मुद्दा हाल्न चाहन्छ र तिम्रो लुगा लिन खोज्छ भने उसलाई तिम्रो खास्टो पनि देऊ। ४१ अनि यदि अख्तियार हुने कसैले तिमीलाई जबरजस्ती काममा लगाएर एक किलोमिटर परसम्म लैजान खोज्छ भने ऊसित दुई किलोमिटरसम्मै जाऊ। ४२ तिमीसित माग्नेलाई देऊ र तिमीसित विनाब्याज ऋण लिन चाहनेलाई इन्कार नगर। ४३ “तिमीहरूले यसो भनिएको सुनेका छौ: ‘तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नू र आफ्नो शत्रुलाई घृणा गर्नू।’ ४४ तर म तिमीहरूलाई भन्छु: आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गरिरहो र तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूका लागि प्रार्थना गरिरहो। ४५ यसरी तिमीहरू स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाका छोराहरू बन्न सक्नेछौ, किनकि उहाँले खराब र असल दुवैमाथि घाम लगाइदिनुहुन्छ अनि भला र दुष्ट दुवैमाथि पानी वर्षाउनुहुन्छ। ४६ किनभने यदि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने तिमीहरूले के इनाम पाउँछौ र? के कर उठाउनेहरूले* पनि त्यसै गरिरहेका छैनन्‌ र? ४७ अनि यदि तिमीहरू आफ्नै दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने कुनचाहिं ठूलो काम गरिरहेका हुन्छौ र? के अन्यजातिहरूले पनि त्यसै गरिरहेका छैनन्‌ र? ४८ जस्तो स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबा सर्वगुणी हुनुहुन्छ, त्यस्तै तिमीहरू पनि सर्वगुणी होओ।
^ मत्ती ५:३ * वा, “जसले पवित्र शक्तिको भीख माग्छन्‌”; “जसले परमेश्वरको आवश्यकता छ भनी बुझ्छन्‌।”
^ मत्ती ५:६ * वा, “परमेश्वरको इच्छाअनुसार गर्न र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नका।”
^ मत्ती ५:२२ * अर्थात्‌, “यहूदी न्यायपरिषद्सामु।”
^ मत्ती ५:२२ * यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती ५:२६ * शाब्दिक, “क्वाड्रन।” एक क्वाड्रन बराबर एक दिनारको १/६४ भाग हुन्छ।
^ मत्ती ५:२९ * शाब्दिक, “ठेस पुऱ्याउँछ।”
^ मत्ती ५:३२ * अतिरिक्त लेख ४ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती ५:३७ * अर्थात्‌, “सैतानतर्फको।”
^ मत्ती ५:४६ * त्यतिखेरका मानिसहरू कर उठाउनेहरूको इज्जत गर्दैनथे।